Export Kutakura - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
JERA fiber inopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi yakanakisa kune vatengi.
Zvatinotarisira nezvazvo harisi chete iro mhando yezvigadzirwa, asiwo mamiriro ezvinhu ezvigadzirwa mushure mekutakura uye 3rd ruoko rwekufambisa. Kunyanya kutakurwa kweLLL, Panogona kunge paine kutakurwa kwakawanda zvinhu zvisati zvasvika kwekupedzisira, uye yedu yepakati kurongedza system inokwanisa kuona kuti pasuru yacho yakasimba zvakakwana kudzivirira chero zvigadzirwa zvigadzirwa panguva yekufambisa.
Isu tichabatsira vatengi vedu kuti vawane nzira dzinoshanda uye dzakakodzera kurongedza panguva yekutenga zvekutenga, izvo zvinozovabatsira kuchengetedza mari yavo.
Kazhinji isu tinopa vatengi vedu zvinotevera kurongedza nzira:
1.high-mhando katoni. Iyi nzira yepakeji inowanzo shanda mukutakura mashoma uremu zvigadzirwa senge fiber optic tambo, inodonha tambo kambo, fiber optic mabhokisi ekuparadzira uye nezvimwe.
2.High-mhando Carton pamwe ne poly bhegi. Iyi nzira yepakeji inowanzo shanda mukutakura zvigadzirwa zvinorema senge simbi dzesimbi, mabheji esimbi isina waya, magetsi epakati uye akakwirira magetsi accessories, simbi pole bhaudhi kana mabhureki.
3.Customized matanda pallets. Vamwe vatengi vanokumbira mapallet kuendesa nhumbi yavo kana vachiita LCL kana FCL. Iyi nzira yepakeji inoshandiswa pakurongedza mwenje zvigadzirwa senge yakaderera voltage ABC tambo fittings, insulated kuboora zvinobatanidza, tambo makumbo, FTTH tambo zvishongedzo uye nezvimwe.
4.Wooden mabhokisi. Inyorerwa yakanyanya kuremerwa simbi yekukanda kana yekugadzira fittings. Zvakaita socket ziso, clevis, bhora ziso mukomana anobata etc.
Kugamuchirwa kuti utibate kuti uwane rumwe ruzivo! Iwe uchawana emakwikwi emhando yezvigadzirwa zveFTTX zvine mhando yepamusoro, kukurumidza kuendesa uye basa rakanakisa kubva kuJera.